ခရစ်တော်၏သားတော်ဖြစ်ခြင်းသက်သေပြချက | The Proof of Christ’s Sonshp! | Real Conversion
ဧပြီလ ( ၁၅ ) ရက်နေ့ စနေနေ့၊ ညနေပိုင်းတွင် ဟောကြားသော
“သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူ၍၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်၊ တန်ခိုးနှင့်တကွ ဘုရားသခင်၏သားတော်ထင်ရှားဖြစ်တော်မူသော ငါ တို့သခင်ယေရှုခရစ်တည်းဟူသော မိမိသားတော်ကိုအကြောင်းပြု၍ ဘုရားသခင်သည် ရှေးက မိမိပရောဖက်များအားဖြင့်၊ သန့်ရှင်းသော ကျမ်းစာ၌ ဂတိထားတော်မူသော ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောစေခြင်းငှါ၊ ရွေးချယ်ခွဲထား၍ တမန်တော်အရာ၌ခန့်ထားသော ယေရှုခရစ်၏ကျွန် ငါပေါလုသည်၊” ( ရောမ ၁း ၃-၄ ) )
ခရစ်ယာန်စာပေဗဟုသုတရှိခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း Fuller Seminary ကို ၁၉၆၃ ခုနှစ်တွင် စွန့်ခွါခဲ့မှုတွင် ၎င်း၏ရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း ဒေါက်တာ Wilbur M. Smith အလွန်ပဲ လေးစားအာကျမိသည်။ သင်တန်းကျောင်းကိုစွန့်ခွါခဲ့ရသည့်အကြောင်း မှာ သမ္မာကျမ်းစာ၏အမှားအယွင်းမရှိခြင်းမှသွေဖြည်ခြင်းနှင့်လီဗရယ်ဝါဒကို စွဲကိုင်လာခြင်း ကြောင့်ဖြစ်သည်။ (Harold Lindsell, Ph.D., သမ္မာကျမ်းစာအတွက်တိုက်ပွဲ၊ ၁၉၇၈၊ စာ-၁၁၀- ၁၁၂ ) ဒေါက်တာ Smith က ရောမ ၁း ၄ အကြောင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထိုးဖောက်နိုင်သောမေး ခွန်းတစ်ခုကို “ကျွန်ုပ်တို့၏တရားဟောဆရာကြီးများသည် ထိုအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး လုံး ၀ဟောပြောခြင်းမရှိသည်ကို အံ့ဩမိသည်။ သို့မဟုတ် ယုံကြည်ခြင်းကိုသေချာစေသည့် ဤ ကျမ်းပိုဒ်ကို အနည်းဆုံး တရားဒေသနာတစ်ချက်တောင်မှ မဟောပြောကြပေ” ဟုဆိုသည်။ (Wilbur M. Smith, D.D., ထို့ကြောင့်၊ ရပ်တည်ပါ၊ Keats Publishing, ၁၉၈၁၊ စာ-၅၈၃) ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး တရားဟောချက်သည် နှစ်ပေါင် ၁၂၅ နှင့်အတွင်း အနည်းငယ်ရှိသည်၊ အထူးသဖြင့် “ဆုံးဖြတ်ချက်ဝါဒ” ထွက်ပေါ်လာပြီး နောက်ပိုင်း အနည်းငယ်ရှိသည်ဟူသောအချက်တွင် လိမ်ညာမှုရှိနိုင်သည်ဟု ထင်မိသည်။ C. G. Finney လက်ထက်မှစ၍ တရားဒေသနာများကို လူတို့ထံ ပေးအပ်လိုက်ပြီး လူတို့က လုပ်ဆောင်ကြသောအရာများဖြစ်ကြသည်။ ဤနေ့ရက်ကာလတို့တွင် ဘုရားသခင်၏အရာ သည် လျော့ထွက်သွားခဲ့ပြုကြသည်။လူသားအလုပ်ကိုသာ ဦးစားပေးကြသည်။ ထို့ကြောင့် ဧဝံဂေလိခရစ်ယာန်များသည် ခရစ်တော်ကိုဗဟိုပြုသောအတွေးအခေါ်ထက် စိတ်ပညာ ဆိုင်ရာ၊ ဓမ္မအတွေးအခေါ်ထက် လူသားဆိုင်ရာအတွေးအခေါ်၊ ခရစ်တော်ကိုဗဟိုပြုသော လုပ်ဆောင်ချက်များထက် လူကိုဗဟိုပြုသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုသာလုပ်ဆောင်ကြသည်၊
တမန်တော်ဝတ္ထုထဲ၌ တရားဒေသနာတိုင်းတွင် အဓိကထားဟောပြောချက်မှာ ရှင်ပြန် ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ တမန်တော်တို့သည် ခရစ်တော်၏ထမြောက်ခြင်းမ ပါဘဲ လုံးဝမဟောပြောနိုင်ကြပါ။ ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းမှာ သူတို့ဟောပြောသောဧဝံဂေလိ တရား၏အနှစ်ချုပ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ယနေ့ခေတ်တွင် ခရစ်တော်၏ထမြောက်ခြင်းအ ကြောင်းကိုဖော်ပြပြောဆိုလျှင် ရှင်ပြန်ထမြောက်ရာတနင်္ဂနွေနေ့ကို အဓိပါယ်လျော့ပါးစေ သည်။ ၎င်းရှုထောင့်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အမှုတော်ဆောင်များသည်လည်း ဟောလေ့ဟောထ နည်းပါးသည်။
ဒေါက်တာ Michael Horton က ၎င်း၏ ခရစ်ယာန်မပါသောခရစ်ယာန်ဘာသာ စာ အုပ်တွင် ကွန်ဆာဗေ့တစ်အသင်းတော်များရှိ ထမြောက်ရာတနင်္ဂနွေနေ့တရားဒေသနာများမှာ “ယေရှုသည် ၎င်းကိုဆွဲထားသောအရာများကို အဘယ်သို့အောင်မြင်နိုင်သည်အကြောင်း၊ သို့ ဖြစ်၍ ဧဝံဂေလိအသင်းတော်များသည် လီဗရယ်များနှင့်အပြိုင် ဧဝံဂေလိတရားအစား စိတ်ပညာ၊ နိုင်ငံရေး၊ သို့မဟုတ် ကိုယ်ကျင့်တရားအကြောင်းကို ယနေ့ပြောဆိုနေကြသကဲ့သို့ ဖြစ်သည်” ဟု ညွှန်းဆိုထားပါသည်။ (Michael Horton, Ph.D., Baker Books, ၂၀၀၈၊ စာ- ၃၀) ကျွန်ုပ်လေးစားအားကျရသောသင်းအုပ်တစ်ပါးဖြစ်သူ ဒေါက်တာ R. A. Torrey က လည်း ၎င်း၏နာမည်ကျော်သောစာအုပ်ဖြစ်သည့် “ခရစ်တော်အတွက် လုပ်ဆောင်ရမည့်ပုံစ” တွင် ခရစ်တော်၏ထမြောက်ခြင်းအကြောင်း တရား ဒေသနာတစ်ခုမျှမရှိကြောင်း ထူးဆန်းစွာ တွေ့မြင်ရပါသည်။ (Fleming H. Revell, n.d.) ဒေါက်တာ Torrey က တရားဟောသူများအ တွက် တရားဒေသနာအနှစ်ချုပ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး စာမျက်နှာ ၁၅၆ မျက်နှာပေးထားသည်။ သို့ သော် ၎င်းတွင် ယေရှု၏ထမြောက်ခြင်းအကြောင်း တစ်ခုမျှမပါဝင်ပါ။ ယနေ့အခြေအနေမှာ ပို၍ပင် ဆိုးနေပါသေးသည်။
ခေတ်သစ်ဓမ္မသီချင်းများကို စစ်ဆေးသောအခါ ခရစ်တော်၏ထမြောက်ခြင်းအ ကြောင်းဖော်ပြသည့် သီချင်းဆယ်ပုဒ်လောက်သာတွေ့ရသည်။ အားလုံးထဲတွင် တစ်ခုမှာ နှစ် ဆယ်ရာစုတွင် ရေးစပ်ထားသောတေးသီချင်းဖြစ်ပါသည်။ နှစ်ပုဒ်မှာ ဆယ့်ရှစ်ရာစုတွင် ရေးစပ် ထားပါသည်။ သုံးပုဒ်မှာ ဆယ့်ကိုးရာစုတွင် ရေးစပ်ထားပြီး တစ်ပုဒ်မှာ ဆယ့်ခြောက်ရာစုတွင် ရေးစပ်ထားသည်။ အခြားတစ်ပုဒ်မှာ ဆယ့်ခုနှစ်ရာစု၊ တစ်ခုမှာ ဆယ့်ငါးရာစု၊ နောက်နှစ်ခုမှာ ဆယ့်ရှစ်ရာစုဖြင့် အသီးသီးရေးစပ်ထားကြပါသည်။ ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းရေးစပ်ထား သည့် တစ်ခုတည်းသောတေးကောင်းတစ်ပုဒ်မှာ “တဖန်အသက်ရှင်သည်”၊ Paul Rader ရေး စပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး နှစ်ဆယ်ရာစုတွင် ရေးစပ်ထားသည်။ သို့ရာတွင် ကျွန်ုပ်သိသလောက် မည်သည့်ဓမ္မသီချင်းစာအုပ်တွင်မျှမတွေ့ရပါ။ အားလုံးမတ်တပ်ရပ်ပြီး ထပ်ဆိုကို သီဆိုကြပါစို့၊
သေသောသူသည် တဖန်ပြန်၍ အသက်ရှင်သည်၊
သေသောသူသည် တဖန်ပြန်၍ အသက်ရှင်သည်။
(“တဖန်အသက်ရှင်သည်၊ Paul Rader, ၁၈၇၈-၁၉၃၈)
အားလုံးထိုင်နိုင်ပါသည်။ P.O. Box 15308, Los Angeles CA 90015 ဖြင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါ သည်။ Paul Rader ၏ သီချင်းကို မှာယူနိုင်ပါသည်။ တဖန် ခေတ်သစ်ဓမ္မသီချင်းများတွင် ထ မြောက်ခြင်းအကြောင်းမရှိခြင်းက Finney အချိန်ကာလကတည်းက အရေးကြီးသည့် ဤအ ရာများသည် လစ်လျူရှုထားခြင်းခံရသည်ကို ပြသထားပါသည်။ ခရစ်တော်သည် အောက်ပါအ တိုင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။
“တန်ခိုးနှင့်တကွ ဘုရားသခင်၏သားတော်ထင်ရှားဖြစ်တော်မူသော …..ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောစေခြင်းငှါ၊ ရွေးချယ်ခွဲထား၍၊ ” ( ရောမ ၁း ၄ ) )
ဤအကြောင်းကို တရားဟောသူ ခပ်ရှားရှားဖြစ်ပါသည်။ သီဆိုခြင်းလည်း ခပ်ရှားရှားပင်ဖြစ်ပါ သည်။ အနောက်ပိုင်းတွင်ရှိသောအသင်းတော်များသည် ခြောက်သွေ့နေကြသည်မှာ အံ့ဩစ ရာမဟုတ်ပါ။ ထမြောက်တော်မူခဲ့သောခရစ်တော်၌ ယုံကြည်ခြင်းမရှိလျှင် နိုးထမှုဖြစ်လာရန် မမျှော်လင့်နိုင်ပါ။ အသက်ရှင်သောသတင်းစကားလည်း မရရှိနိုင်ပါ။ အကြောင်းမှာ သတင်း စကားတစ်ချို့မှာ ပျောက်သွားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင် မစတော်မူပါ။
တတိယကမ္ဘာတွင်ရှိသောသူများသည် ဥရောပနှင့်အမေရကနိုင်ငံများထက်ပင် ထ မြောက်သောခရစ်တော်အကြောင်းကို ပို၍ အလေးအနက်ထားကြသည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာ သည် ထိုနေရာများတွင် ကြီးထွားလာသော်လည်း ဤနေရာတွင် အသက်မဲ့နေသည်မှာ အံဩ စရာမဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်သည် အသက်နှစ်ဆယ်အရွယ်ကောင်းလေးတစ်ဦး တတိယနိုင်ငံထဲကလာ သောသူကို အီးမေးလ်ဖြင့် ဆက်နွယ်ခဲ့သည်။ သူက “ငယ်စဉ်က ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ချက်ကို ကြော်ငြာစေရန် ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့ ပြင်းထန်သည့်ဒုက္ခထဲတွင် ရောက်နေကြောင်း ပြောဆို ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် အကူအညီတောင်းအော်ဟစ်သည်။ သို့ရာတွင် အဘယ်သူမျှမလာပါ။ (ခရစ်ယာန်များစွာ)တို့သည် ပျက်စီးနေကြကြောင်းတွေ့ရသည်။ ကလေးသူငယ်များကို ညှင်း ပန်းနှိပ်စက်ကြသည်။ အိန္ဒိယ၊ မြန်မာ၊ တို့တွင် ဒုက္ခစခန်းများ၌ ပို့ဆောင်ကြသည်။ ယေရှုကို နောက်ထပ်မကိုးကွယ်တော့ပါဟု ပြောဆိုကြရန် လျှပ်စစ်ဖြင့်ထိုး၍ နှိပ်စက်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ထိုသို့အသက်ရှင်နေသူထဲတွင် တစ်ဦးအပါအဝင်ဖြစ်သည်” ဟု သူ့အကြောင်းကို ပြောဆိုသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ထိုအကြောင်းကိုဖတ်ရတော့ မျက်ရည်ကျခဲ့သည်။ အမေရိကန် ပြည် သို့မဟုတ် အနောက်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်သောကလေးသူငယ်များကဲ့သို့ ကလေးများ သို့မဟုတ် အရွယ်ရောက်လူငယ် များကို ဘယ်မှာ ရှာတွေ့နိုင်မလဲ။ ဤလူငယ်လေးက သူနှင့် အခြားကလေးများသည် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့သောခရစ်တော်ကို ရင်ဆိုင်တွေ့ခွင့်ရရှိခဲ့ကြသည် ဟု ဆိုပါသည်။ သူတို့သည် ရှင်ပြန်ထမြောက်သောခရစ်တော်ကို တွေ့ကြုံလာကြသောအခါ သူသည် ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကို သိရှိခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည် မည်သည့် နည်းလမ်းဖြင့် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကို ခံရစေကာမူ ခရစ်တော်ကို လက်လျှော့ဖို့ လုံးဝစိတ်ကူး မရှိကြပါ။ သူသည် အသက်ရှင်သောဘုရား၊ သေခြင်းမှထမြောက်သောဘုရားဖြစ်ကြောင်းကို မျက်ဝါးထင်ထင်မြင်တွေ့ခွင့်ရခဲ့ကြသည်။ ထိုအချက်က သူတို့ကို စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်ဖြစ် စေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောကျမ်းပိုဒ်တွင် တမန်တော်ရှင်ပေါလုပြောဆိုနေသည်မှာ ထိုအကြောင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ခရစ်တော်က ဤသို့မိန့်တော်မူခဲ့သည်။
“ကြော်ငြာသည်”ဟု အနက်ဖွင့်ထားသည့် ဂရိစကားလုံးအဓိပါယ်မှာ “သေချာစေ သည်” “အမှတ်အသားပြုသည်” (ခိုင်မာသောစကားလုံး # ၃၇၂၄ ) ဖြစ်သည်။ ယေရှုကို သေ ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းအာဖြင့် ဘုရားသခင်၏သားတော်အဖြစ် သေချာစေသည်။ အမှတ်အ သားပြုလိုက်သည်။၁၅၉၉ တွင် ထုတ်ဝေသော Geneva ကျမ်းစာက “ဖော်ပြထားသည်” ဟု ဆိုသည်။ (ရောမ ၁း ၄ အကြောင်း မှတ်ချက် # ၁ ) ခရစ်တော်ကို သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်း အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကို “ထင်ရှားစေသည်၊ ဖော်ပြထားသည်။”
၁။	ပထမအချက်၊ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟု မည်သို့ခေါ်ဆိုသနည်း။
ဤသည်မှာ သူ၏သွန်သင်ခြင်းအားဖြင့်မဟုတ်ပါ။ သူသည် တောင်ပေါ်ဒေသနာအ ပါအဝင် အံ့ဩဘွယ်ကောင်းသည့်အချက်များစွာကို သွန်သင်ပေးထားသည်။ သို့ရာတွင် သူ၏ သွန်သင်ခြင်းတစ်ခုတည်းက ဘုရားသားဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြထားသည်မဟုတ်။ သူပြထာ သောနိမိတ်လက္ခဏာများကလည်း သက်သေမပြပါ။ လူများကို သေခြင်းမှထမြောက်စေခြင်း ကလည်း ဘုရားသားဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြထားသည်မဟုတ်။ ဓမ္မဟောင်းကာလတွင် ပရောဖက်ဧလိယသည် လူငယ်လေးတစ်ဦးကို သေခြင်းမှ ပြန်ရှင်စေခဲ့သည်။ သို့သော် ဘုရား သခင်၏သားတော်မဟုတ်ပါ။ ( ၃ရာ ၁၇း ၁၇-၂၄ ) ဧလိရှဲသည်လည်း ကလေးငယ်တစ်ဦးကို သေရာမှ ပြန်ရှင်စေခဲ့သည်။ ( ၄ ရာ ၄း ၃၂-၃၇ ) သို့သော် သူသည်လည်း ဘုရားသခင်၏သား မဖြစ်ခဲ့ပါ။ မောရှေကလည်း ပင်လယ်နီကို နှစ်ခြမ်းကွဲစေခြင်းအပါအဝင် နိမိတ်လက္ခဏာများ စွာကို ပြသခဲ့သည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏သားတော် မဟုတ်ခဲ့ပါ။ ယေရှုသည် ဘုရားသခင် ၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကို ဖော်ပြသည့် တစ်ခုတည်းသောအမှတ်အသားမှာ ကိုယ်ခန္ဒာဖြင့် ထမြောက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုကိုယ်တော်တိုင်က သူ၏ထမြောက်ခြင်းသည် ဆိုးညစ် သောအမျိုးတို့ကိုပေးထားသည့် အမှတ်အသားဖြစ်ကြောင်း မိန့်တော်မူခဲ့သည်။
“ကိုယ်တော်က၊ ဆိုးညစ်၍ မျောက်မထားသောအမျိုးသည် နိမိတ် လက္ခဏာကိုတောင်းသည်မှာ၊ ပရောဖက်ယောန၏ နိမိတ်လက္ခ ဏာမှတပါး အဘယ်နိမိတ်လက္ခဏာကိုမျှ သူတို့အား မပြရာ။ ယောနသည် ငါးကြီးဝမ်းထဲမှာ သုံးရက်နေရသကဲ့သို့၊ လူသား သည် မြေကြီးထဲမှာ သုံးရက်နေရလတံ့။” ( မဿဲ ၁၂း ၃၉- ၄၀ ) )
ယေရှုသည် ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းများရှေ့မှောက်တွင် ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ် ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သောကြောင့် အသေသတ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ( မဿဲ ၂၆း ၆၃-၆၆ ) သူသည် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အသေသတ်ခြင်းခံရစဉ်ခါ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းများက အောက်ပါ အတိုင်း ပြက်ရယ်ပြုခဲ့ကြသည်။
“ဆင်းလျှင် ငါတို့ယုံကြည်မည်။ သူသည် ဘုရားသခင်ကို ကိုးစားပြီ။ ငါသည် ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်၏ဟုဆိုပြီ။ သို့ဖြစ်၍ ဘုရားသခင် သည် သူ၌ အလိုတော်ရှိလျှင် ယခုပင် ကယ်တင်တော်မူပါလေစေ ဟု ပြက်ယယ်ပြု၍ ပြောဆိုကြ၏။” ( မဿဲ ၂၇း ၄၃ ) )
ဘုရားသခင်က သေခြင်းမှထမြောက်စေခြင်းအားဖြင့် ယေရှုအား သားတော်ဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံချက်ကို ပြသခဲ့သည်။ ယေရှုက ဤသို့ဆိုခဲ့သည်။
ဘုရားသခင်သည် သုံးရက်မြောက်သောနေ့တွင် သေခြင်းမှထမြောက်စေခြင်းအားဖြင့် သား တော်အဖြစ် လက်ခံကြော်ငြာခဲ့သည်။ ထိုသီချင်းကို သီဆိုကြပါစို့။
၂။	ဒုတိယအချက်၊ ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟု အဘယ့်ကြောင့် ခေါ်ဆိုရသနည်း။
ဒေါက်တာ Charles Hodge ( ၁၇၉၇-၁၈၇၈ ) ၊ Princeton Theological Seminary တွင် ဓမ္မသစ်ကျမ်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာ သင်ကြားပို့ချပေးလာသောသူက ဤသို့ ဆိုပါသည်။
ခရစ်တော်သည် ဘုရားသားဖြစ်ကြောင်းသက်သေသည် ခရစ် တော်ထမြောက်ခြင်းမတိုင်မှီအထိ ပြည့်စုံခြင်းမရှိပါ။ သို့မဟုတ် အ ကျိုးသက်ရောက်မှု၏ပြည့်စုံခြင်းကို တမန်တော်များက သိရှိထား ကြပါသည်။ သူသည် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင် ၏သားဖြစ်ကြောင်းကို သက်သေပြသည်။ (ကျမ်းပိုဒ်) များစွာတွင် ခရစ်တော်၏ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကို ခရစ်တော်သွန်သင်ခဲ့ သမျှသောအရာ၏မှန်ကန်ခြင်းတစ်ခုအဖြစ် တင်ပြထားပါသည်။ သူမြွတ်ဆိုသမျှ၏ ပြည့်စုံခြင်းလည်းဖြစ်ပါသည်။ ခရစ်တော်သည် မိမိကိုယ်ကို ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ကြောင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မိန့် ဆိုသောအခါ သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းမှာ သူကြွေးကြော်ခဲ့သော သမ္မာတရားကို ဘုရားသခင်တံဆိပ်ခတ်ထားခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ သူသည် သေခြင်းတန်ခိုးအောက်တွင်ရှိနေသောအချိန်တွင် ဘုရား သခင်က သားဖြစ်ခြင်းကို လက်မခံသော်လည်း၊ သေခြင်းမှထ မြောက်တော်မူခဲ့သောကြောင့် “ယနေ့တွင် သင်သည် ငါ့သာဖြစ် ကြောင်းကြွေးကြော်ပါသည်” ဟုဆိုလျက် လက်ခံခဲ့သည်။ (Charles Hodge, Ph.D., ရောမဩဝါဒစာ အနက်ဖွင့်ကျမ်း၊ The Banner of Truth Trust, ၁၉၉၇၊ စာ- ၂၀-၂၁၊ ရောမ ၁း ၄ မှတ် စု)
ထို့ကြောင့် ခရစ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်သည်ဟူသောသက်သေကို ၎င်း၏ ထမြောက်ခြင်းက ထင်ရှားစေပြီး သူသွန်သင်ခဲ့သမျှသောအရာကို အဟုတ်ဖြစ်ကြောင်း သက် သေပြခဲ့သည်။
ဒေါက်တာ Wilbur M. Smith က ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းက အာမခံချက် ပေးသည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။
…မှန်ကန်မှု၊ ခရစ်တော်မိန့်တော်မူသမျှအားလုံးကို မှီခိုအားထား နိုင်ခြင်းရှိသည်။ (ကြိုတင်မိန့်မှာထားသကဲ့သို့ သင်္ချိုင်းတွင်းမှ ထ မြောက်ခဲ့သောကြောင့်) ဤကြိုတင်မိန့်မူချက်များ မှန်ကန်လာ သည်။ကျွန်ုပ်တို့သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသမျှသည် မှန်ကန်ရမည် ဟု ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ထားသည်။ သခင်ဘုရားက သူ့ကိုယုံကြည် သောသူတိုင်းသည် ထာဝရအသက်ကိုရမည်ဖြစ်ပြီး မယုံကြည်ဘဲ ငြင်းပယ်သောသူများသည် ထာဝရအပြစ်စီရင်ခြင်းခံရကြမည်ဟူ သောစကားသည်လည်း မှန်ကန်မည်ဟု လက်ခံယုံကြည်သည်။ သူသည် မှန်ကန်သောအရာကို မိန့်ဆိုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကို လုံးဝလက်မခံလျှင်၊ နှုတ် တော်မှမြွတ်ဆိုသောသမ္မာတရားကို သံသယရှိနေလျှင် အပြစ်စီ ရင်ခြင်းကို ခံရမည်။ (Smith, ထို့ကြောင့် ရပ်တည်ရသည်၊ ၎င်း၊ စာ- ၄၁၈- ၄၁၉)
ယေရှုသည် တပည့်တော်တို့အား ဤသို့မိန့်မူခဲ့သည်။
“ထိုအခါ ကိုယ်တော်သည် တကျိပ်နှစ်ပါးသော တပည့်တော်တို့ကို ခေါ်၍၊ ငါတို့သည် ယေရုရှလင်မြို့သို့ ယခုသွားကြ၏။ပရောဖက် များရေးမှတ်သမျှသည် လူသား၌ ပြည့်စုံရလိမ့်မည်။ တပါးအမျိုး သားတို့လက်သို့အပ်နှံခြင်း၊ ပြက်ယာယ်ပြုခြင်း၊ ညှဉ်းဆဲခြင်း၊ တံ တွေးနှင့်ထွေးခြင်းကို ခံရလိမ့်မည်။ သူတို့သည် လူသားကို ရိုက် ပုတ်၍ သတ်ကြလိမ့်မည်။ သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ ထမြောက် လိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။” ( လုကာ ၁၈း ၃၁-၃၃ ) )
ယေရှုက လုကာ ၁၈း ၃၁-၃၃ တွင် မိန့်တော်မူခဲ့သောအရာသည် အမှန်တကယ်ဖြစ်လာခဲ့ သည်။ သူသည် ပျက်ရယ်ပြုခြင်းကို ခံရသည်။ တံတွေးနှင့်ထွေးခြင်းကိုလည်းခံခဲ့ရသည်။ ရိုက် ပုတ်ခြင်းကိုလည်း ခံခဲ့ရသည်။ နောက်ဆုံး လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် အဆုံးစီရင်ခဲ့ကြသည်။ သို့ရာ တွင် လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် အသေသတ်ခြင်းခံရပြီး သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ သေခြင်းမှထ မြောက်တော်မူခဲ့သည်။ မိမိအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ယေရှု၏ကြိုတင်ဟောကြားမှုအ ကြောင်း တိကျသောပြည့်စုံခြင်းက သူမိန့်တော်မူခဲ့သမျှသည် မှန်ကန်သောအရာဖြစ်ကြောင်း သက်သေထင်ရှားစေသည်။ အကြောင်းမှာ သူသည် …..
“သေသောသူသည် တဖန် အသက်ရှင်လိမ့်မည်။” အားလုံးသီဆိုကြပါစို့။
သူသည် ကိုယ်တိုင်မိန့်တော်မူခဲ့သည်အတိုင်း သေခြင်းမှထမြောက်ခဲ့သောကြောင့် သူမိန့်တော်မူသည့်သမ္မာတရားအတိုင်း ကျွန်ု္ပ်တို့လည်း ဖြစ်န်ိုင်ပါသည်။
“သင်တို့သည် ပြောင်းလဲ၍…ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကို မဝင်ရ ကြ။” ( မဿဲ ၁၈း ၃ ) )
ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုစကားကို အလေးအနက်ထားရပါမည်။ အကြောင်းမှာ ၎င်းသည် ဘုရားသ ခင်၏ ရှင်ပြန်ထမြောက်သောသားတော်၏နှုတ်မှထွက်လာသောစကားဖြစ်ပါသည်။ သင်သည် အမှန်တကယ် ပြောင်းလဲခဲ့ပြီလား။ သင်ပြောင်းလဲသည်မှာ သေချာမှုရှိပါသလား။ ဘုရားသခင် ၏သားတော်က ပြောင်းလဲခြင်းမရှိလျှင် “ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံကို မဝင်ရကြ” ဟု မိန့်တော်မူခဲ့ သည်။ သင်၏ပြောင်းလဲခြင်းကို အဘယ်မျှလောက် အလေးထားပါသနည်း။ သင်ပြောင်းလဲ ခြင်းရှိသည်ကို သေချာစေရမည်။
“ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏။ သမ္မာတရားလည်းဖြစ်၏။ အသက်လည်း ဖြစ်၏။ ငါ့ကိုအမှီမပြုလျှင် အဘယ်သူမျှ ခမည်းတော်ထံသို့ မရောက်ရ။” ( ယောဟန် ၁၄း ၆ ) )
သူမိန့်တော်မူသောစကားကို သင်သည် အလေးအနက်ထား နားထောင်ရပါမည်။ သူထံသို့ လာပြီး ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ရန်မှာ အဘယ်မျှလောက် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းပါ သနည်း။ သင့်စိတ်နှလုံးထဲတွင် အယူသည်းခြင်းနှင့်မှားယွင်းသောဘာသာရေးအယူအဆများ ကို ထုတ်ပစ်ပြီး ခရစ်တော်တစ်ပါးတည်းကိုသာ မှီခိုအားထားခြင်းကို သတိပြုလုပ်ဆောင်ရ မည်။ အကြောင်းမှာ ယေရှုက “ငါမှတပါး အဘယ်သူမျှ ငါ့ခမည်းတော်ထံသို့မရောက်ရ” ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။
တဖန်၊ ဘုရားသခင်၏ ရှင်ပြန်ထမြောက်သောသားတော်က ဤသို့မိန့်တော်မူသည်။
“ခမည်းတော်သည် ငါ့အားပေးသမျှသော သူတို့သည် ငါ့ထံသို့လာ ကြ၏။ ငါ့ထံသို့လာသောသူကို ငါသည် အလျှင်းမပယ်”။ ( ယော ဟန် ၆း ၃၇ )
သူထံသို့ “ဝင်ရောက်ရန် ကြိုးစားအားထုတ်မှု” မည်သို့ပြုမည်နည်း။ ( လုကာ ၁၃း ၂၄ ) ယေရှု ထံသို့လာခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး သင်သည် သတိပြုရမည်။ စဉ်းစားဆင်ခြင်ရမည်။ ယေရှုက ဤ သို့ဆိုသည်ကို သတိပြုပါ။
“ဝန်လေး၍ ပင်ပန်းသောသူအပေါင်းတို့ ငါ့ထံသို့လာကြလော့။ ငါသည် ချမ်းသာပေးမည်။” ( မဿဲ ၁၁း ၂၈) )
သင်သည် ရှင်ပြန်ထမြောက်သော ဘုရားသခင်၏သားတော်၏စကားကို နားထောင် ရန် ဆုတောင်းပါ၏။ သင်သည် သူ့ထံသို့ တိုက်ရိုက်ရောက်ရှိလာမည်အကြောင်း၊ သင့်အပြစ် များကို ကားတိုင်ပေါ်တွင်သွန်းသောအသွေးတော်ဖြင့်ဆေးကြောခြင်းပြီး ရှင်ပြန်ထမြောက် သောအသက်တာဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်မည်အကြောင်း ဆုတောင်းပါ၏။ သူမိန့်တော် မူသောအရာကို လက်ခံယုံကြည်ပါ။ သူ့ထံသို့တိုက်ရိုက်လာပြီး ကယ်တင်ခြင်းကို ရယူပါ။ သူ မိန့်တော်မူသည်အတိုင်းလုပ်ဆောင်ပါ။ ဤသို့ဆိုပါသည်။
(“တဖန်အသက်ရှင်သည်”၊ Paul Rader, ၁၈၇၈-၁၉၃၈ )
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ Mr. Noah Song က ကျမ်းစာဖတ်ကြားသည်။ လုကာ ၁၈း ၃၁- ၃၄
“တချိန်က ခရစ်တော်ကိုစော်ကားသူဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်"(John Bakewell, ၁၇၂၁-၁၈၁၉ ရေးစပ်သည်။ )
၁။	ပထမအချက်၊ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟု မညျသို ခေါ်ဆိုသနည်း။ ၃ ရာ ၁၇း ၁၇-၂၄၊ ၄ ရာ ၄း ၃၂-၃၇၊ မဿဲ ၁၂း ၃၉-၄၀၊ ၂၆း ၆၃-၆၆၊ ၂၇း ၄၃။
၂။	ဒုတိယအချက်၊ ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟု အဘယ့်ကြောင့် ခေါ်ဆိုရသနည်း။ လုကာ ၁၈း ၃၁-၃၃၊ မဿဲ ၁၈း ၃၊ ယောဟန် ၁၄း ၆၊ ၆း ၃၇၊ လုကာ ၁၃း ၂၄၊ မဿဲ ၁၁း ၂၈ ။